Esi tọgharịa mgbọrọgwụ paswọọdụ mgbe ịchefuru ya | Site na Linux
Na Linux na gburugburu Unix anyị nwere okwuntughe onye ọrụ yana nke akaụntụ mgbọrọgwụ. Mgbe anyị chefuru paswọọdụ nke onye ọrụ enweghị nsogbu ọ bụla n'ihi na iji akaụntụ mgbọrọgwụ ma ọ bụ jiri sudo anyị nwere ike iji ụfọdụ ngwaọrụ nchịkwa iji weghachite paswọọdụ onye ọrụ furu efu anyị ma ọ bụ naanị ịgbanwe ya maka nke ọhụrụ. N'aka nke ọzọ, mgbe nke ahụ mere anyị na akaụntụ mgbọrọgwụ, nke kachasị ike, ihe na-adịkarị mgbagwoju anya, mana ọ bụghị njedebe ụwa ma ...
Na est mfe totorial anyị ga-akụziri gị otu ị ga-esi nwetaghachi ma ọ bụ tọgharịa mgbọrọgwụ paswọọdụ Ọ bụrụ na i chefuola na enweghị ike ịnweta akaụntụ gị nwere ikike na Linux. Usoro m ga-akọwa bụ ihe a na-ahụ maka nkesa niile, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ntakịrị ntakịrị dabere na iji bootloader ọzọ, wdg, mana ọ bụrụ na iji distro mara ama na GRUB ị ga-agbaso usoro ndị a:
Malitegharịa ekwentị gị ma ọ bụ buut ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị, mana lelee anya ihuenyo GRUB, ebe ọ bụ na ị ga-arụ ụfọdụ arụmọrụ na ha. Ya mere, ọ bụrụ na ngụda amalite ịbanye na ndabara ndabara, megharia onye ahọpụtara ka ọnụ ọgụgụ ahụ wee kwụsị ma nye gị oge. Ọ bụrụ na ihuenyo GRUB apụtaghị n'ihi na ịnweghị oge, ị ga-agbanwe nhazi GRUB ka ọ pụta, ọ bụrụ na ịmaghị otu esi ahapụ okwu m ga-anwa ịkọwara gị ya ...
Ugbu a ozugbo anyị nọ na GRUB, pịa igodo E dezie ụfọdụ nhọrọ.
Choo uzo ebe egosi aha ihe oyiyi ọnụọgụ abụọ kernel nke a na-ebufe na akara ya na-ejedebe "init = / bin / bash". Ọ bụrụ na i lee ahịrị a, ị ga-ahụ na enwere oke ịgụ-naanị (ro) ị ga-agbanwe ka ịgụ-agụ, ya bụ, rw.
Ugbu a pịa F10 ịzọpụta mgbanwe na Malitegharịa ekwentị ahụ na kọmputa na ihe anyị ga-enweta ugbu a ga-abụ a bash shei ozugbo.
Ugbu a, ị ga-arụ ọrụ na ngwaọrụ anyị nwere na shei a gbanwe okwuntughe:
Site na iwu atọ a, a na-amalitegharị ya ozugbo anyị gbanwere paswọọdụ ma anyị nwere ike ịbanye distro ahụ dị ka anyị na-eme ...
Enwere uzo ozo di na usoro a, dị ka iji LiveCD, ma ọ bụ ọbụna na-edegharị hash nke paswọọdụ ama ama n'ọhịa kwekọrọ na akaụntụ mgbọrọgwụ nke / wdg / onyinyo, mana anaghị m akwado nke ikpeazụ, ebe ọ bụrụ na ịchefu ịgbanwe ya ozugbo ị nwere ohere, ọ gaghị adị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Esi tọgharịa paswọọdụ mgbọrọgwụ mgbe ịchefuru ya
"Site n'ike dị ukwuu na-abịa nnukwu ọrụ" - Deede Ben
Zaghachi carlos saldaña
Ezi onyinye Isaac. Daalụ.
Ugbu a maka otu isiokwu banyere etu esi echekwa nchekwa.
Daalụ maka isiokwu ahụ, ekwenyere m na David, ugbu a ọ bụ oge iji chekwaa iwe iji zere nke a, n'ihi na mgbe ahụ "onye ọ bụla" nwere ike ịme ya.
Ma otu edemede banyere otu ị ga-esi tọgharịa paswọọdụ GRUB gị mgbe ịchefuru ya.
Linux Mint 19.1 Tessa kwupụtara, na-abịa na November ma ọ bụ Disemba 2018